Achilles Tendon Problems (အာခိလိကြွက်သားအကြောပြသနာများ) - Hello Sayarwon
Achilles Tendon Problems (အာခိလိကြွက်သားအကြောပြသနာများ)
Achilles Tendon Problems (အာခိလိကြွက်သားအကြောပြသနာများ) ကဘာလဲ။
အာခိလိကြွက်သားအကြောဟာ ခြေသလုံးကြွက်သားနဲ့ ဖနောင့်အရိုးတို့ကို ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခြေချောင်းလေးများပေါ် အားယူထနိုင်ပြီး လမ်းလျှောက်ရာမှာ ပြေးရာမှာ စတင်တွန်းကန် ပေးပါတယ်။ အဓိကပြသနာ ၂ခုကတော့
အာခိလိကြွက်သားအကြောရောဂါဖြစ်ခြင်း။ အကြောအတွင်းနဲ့ အကြောပတ်လည် အသားထဲမှာ အသေးစား စုတ်ပြဲမှုလေးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုစုတ်ပြဲခြင်းဟာ အလွန်အကျွံ အသုံးပြုလို့ ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အာခိလိကြွက်သားအကြောရောင်ခြင်း လို့လည်း တခါတရံ ခေါ်တတ်ပါတယ်။
အာခိလိကြွက်သားအကြော စုတ်ပြဲခြင်း၊ ပြတ်တောက်ခြင်း။ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်စေ၊ တခုလုံးဖြစ်စေ စုတ်ပြဲတတ်ပါတယ်။ တစိတ်တပိုင်း စုတ်ပြဲခြင်းဟာ တခါတရံ မသိသာပါဘူး။ အကြောတချောင်းလုံး စုတ်ပြဲရင်တော့ နာကျင်တဲ့အပြင် အားမပြုနိုင်တာ၊ လှုပ်ရှားလို့ မရတော့တာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အာခိလိကြွက်သားအကြောပြသနာများဟာ ရုတ်တရက် ဖြစ်တတ်တယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် များသောအားဖြင့် သူတို့ဟာ အချိန်နဲ့အမျှ အသေးစား ထိခိုက်မှုလေးတွေကနေ ကြုံတွေ့ရာကနေ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Achilles Tendon Problems (အာခိလိကြွက်သားအကြောပြသနာများ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အသက် ၃၀ကျော် ယောက်ျားတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ အာခိလိကြွက်သား အကြောအများစုဟာ အသက် ၃၀-၅၀ အရွယ် အားကစားသမားတွေမှာ စုတ်ပြဲခြင်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သက်ကြီးပိုင်းတွေမှာလည်း ပြတ်တောက်ခြင်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်စေတဲ့ အချက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် ကာကွယ်ကုသနိုင်ပါတယ်။
Achilles Tendon Problems (အာခိလိကြွက်သားအကြောပြသနာများ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အာခိလိကြွက်သားအကြောရောဂါရဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဖနောင့်ကြောေနေရာ နာကျင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နာကျင်မှုဟာ အသင့်အတင့်ကနေ ဆိုးရွားတဲ့ထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောင်ရမ်းခြင်းလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အထိမခံနိုင် နာကျင်ခြင်းကို တွေ့ရပြီး မနက်ပိုင်းမှာ ပိုဆိုးတတ်ပါတယ်။
တောင့်တင်းမှု ဖြစ်တတ်ပြီး သွေးပူသွားရင် ပျောက်သွားပါတယ်။
အားပြုနိုင်မှု၊ လှုပ်ရှားနိုင်မှု ကျသွားပါတယ်။ ခြေထောက်ဟာ လေးလံသွားပါတယ်။
ဖနောင့်ကြောနေရာကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်မိသလို စူးရှပြင်းထန်သော နာကျင်မှု ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ စုတ်ပြဲပြတ်တောက်ရင် ရုတ်တရက် အသံမြည်သွားတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်း သွေးခြေဥပြီး ရောင်ရမ်းလာတတ် ပါတယ်။
ဖြစ်တဲ့ခြေထောက်မှာ ခြေကြွပြီး သက်သက်သာသာ မလျှောက်နိုင်ပါဘူး။
Achilles Tendon Problems (အာခိလိကြွက်သားအကြောပြသနာများ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အားကစား၊ အလုပ်နဲ့ တခြားလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အလွန်အကျွံသုံးမိတာ၊ အဖန်တလဲလဲ အသုံးချမိတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
တခါတရံ ခြေသလုံးကြွက်သားကို ဖိအားဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ရုတ်တရက် အင်အားသုံး လှုပ်ရှားမိရင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ အားကစားလှုပ်ရှားမှုတွေ၊ တခါတရံ သာမန် ပြေးခြင်း၊ ခုန်ခြင်းတွေမှာတောင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Achilles Tendon Problems (အာခိလိကြွက်သားအကြောပြသနာများ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အားကစားနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်၇ှားမှု။ အလွန်အကျွံ အသုံးပြုခြင်းနဲ့ ထပ်တလဲလဲ လှုပ်ရှားမှုများဟာ အာခိလိ ကြွက်သားအကြောကို ထိခိုက်ပြီး အားနည်းလာစေပါတယ်။ အားကစားလုပ်ခြင်းဟာ ဒဏ်ရာရနိုင်ခြေ များပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးလို လုပ်ငန်းခွင်၊ အိမ်မှာ အပင်စိုက်ခြင်း စတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာလည်း ဖြစ်နိုင်ခြေကို မြင့်မားစေပါတယ်။
အားကစားလေ့ကျင့်မှုပုံစံ မှားယွင်းခြင်း။ မပြေးခင်နဲ့ တခြားလှုပ်ရှားမှုတွေ လှုပ်ရှားခါနီး သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်မှုပုံစံ ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲခြင်းဟာ ဒဏ်ရာရနိုင်ခြေကို ပိုမိုမြင့်မားစေပါတယ်။
အသက်အရွယ်။ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ အာခိလိ ကြွက်သားအကြောနေရာကို သွေးလည်ပတ်မှု လျော့နည်းလာပါတယ်။ ကြွက်သားအကြော ပြသနာ ဖြစ်ခြင်း၊ စုတ်ပြဲခြင်းဟာ အသက် ၃၀ကျော်လာရင် ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်။ ကိုယ်အလေးချိန် အလွန်များရင် ဖြစ်နိုင်ခြေ ကြီးမားပါတယ်။
အမျိုးသားဖြသ်ခြင်း။ အမျိုးသားတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေထက် ထိခိုက်မှု ဖြစ်စေဖို့ အခွင့်အလမ်း ပိုများပါတယ်။
ဖိနပ်။ စုတ်ပြဲနေတဲ့ မတော်တဲ့ ရှူးဖိနပ်တွေ စီးတာများရင်၊ ဖနောင့်ကို အခုအခံ မရှိရင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Achilles Tendon Problems (အာခိလိကြွက်သားအကြောပြသနာများ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဒီပြသနာရှိတယ်လို့ ယူဆရင် ဆရာဝန်ဟာ စမ်းသပ်မှုတွေ အသေးစိတ်ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
လိုအပ်ရင် ခွဲစိတ်မှုလုပ်ဖို့ပါ စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အောက်ပါ စစ်ဆေးမှုတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
အာထရာဆောင်းရိုက်ခြင်း။ ကြွက်သားအကြော ထိခိုက်ခြင်း၊ စုတ်ပြဲခြင်း ရှိမရှိ သိရအောင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း။ ဖနောင့်အရိုးကို စစ်ဆေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
MRI ရိုက်ခြင်း။ ကြွက်သားအကြော ထိခိုက်ခြင်း၊ စုတ်ပြဲခြင်း ရှိမရှိ သေချာသိရအောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဖနောင့်အရိုးကိုလည်း စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
Achilles Tendon Problems (အာခိလိကြွက်သားအကြောပြသနာများ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အနားယူခြင်း၊ မိမိဖာသာ ဝယ်ယူသောက်သုံးနိုင်တဲ့ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးတွေ သောက်သုံးခြင်း၊ အကြောလျှော့ လေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ခြင်း စတာတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဖနောင့်ကို အခုအခံပေးနိုင်တဲ့ ရှူးဖိနပ်တွေစီးဖို့၊ အကြောပေါ် ဖိအားမဖြစ်စေတဲ့ အားကစားပုံစံတွေ လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ စေစီးစွာ ကုသခြင်းဟာ ထိခိုက်မှုတွေ ပိုပြိး ဖြစ်မလာဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ဖိနပ်တွေဟာ ဖိအားကို သက်သာစေပါတယ်။
သိပ်မဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေမှာ လပိုင်းလောက် အနားယူလိုက်ရင် သူ့ဖာသာ ပြန်ကောင်းသွားတတ်ပါတယ်။ စိတ်ရှည်ဖို့နဲ့ အကြောကို ဖိအားဖြစ်စေတဲ့ အားကစားတွေ ပြန်မလုပ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ပိုပြီးဆိုးရွားတဲ့ စုတ်ပြဲပြတ်တောက်ခြင်းတွေအတွက် ခွဲစိတ်ဖို့၊ ပလာစတာစည်းဖို့၊ အထိန်းအကွပ်တပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကာယကုသလေ့ကျင့်ခန်းတွေ အစီအစဉ်တွေဟာ ခြေထောက်နဲ့ ခြေကျင်းဝတ်ကို သန်မာပျော့ပျောင်းစေပါတယ်။ ကြွက်သားအကြောဟာ သက်သာပျောက်ကင်းဖို့ အပတ်ပေါင်း၊ လပေါင်းများစွာ အချိန်ယူဖို့ လိုပါတယ်။
ကုသဖို့ အချိန်ယူရပေမယ့် အများအားဖြင့် ပျောက်ကင်းကြပါတယ်။ အများစုဟာ အားကစားနဲ့ တခြား လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြန်လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။
ဘယ်လို နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက အထောက်အကူ ပြုသလဲ
သွေးပူအကြောလျှော့ခြင်း။ အားကစားနဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ လှုပ်ရှားမှု မပြုခင်မှာ ၅-၁၀ မိနစ်ခန့် သွေးပူလှုပ်ရှားခြင်း၊ အကြောလျှော့ခြင်း ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
အရှိန်လျှော့ပြီး အကြောလျှော့ခြင်း။ ပြင်းထန်တဲ့ လှုပ်ရှားမှု လုပ်ပြီးချိန်မှာ ၅မိနစ်ခန့် လမ်းလျှောက်တာ၊ စက်ဘီးစီးတာလုပ်ပြီး ၅မိနစ်ခန့် အကြောလျှော့သင့်ပါတယ်။
မိမိနဲ့ မသင့်တော်တဲ့ အားကစား၊ ပြင်းထန်တဲ့ လှုပ်ရှားမှု မပြုသင့်ပါဘူး။
အားကစားလုပ်စဉ်မှာ မိမိဖနောင့်ကို သက်တောင့်သက်သာ မဖြစ်စေတဲ့ ဖိနပ်ကို မစီးပါနဲ့။
Achilles tendon problems. https://www.foothealthfacts.org/conditions/achilles-tendon-disorders . Accessed June 10, 2017